Peppa Kisoa Games - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Peppa Kisoa Games
Fotoana mba hiala voly, anisan'izany ny lalao maimaim-poana amin'ny aterineto Peppa Kisoa. Ny mahery fo ny traikefa nahafinaritra, fa kely mavokely kisoa, izay tsy afaka manao na dia iray puddle manarakaraka ny ranonorana. Dabble ao aminy ny fahalemena, ary izany dia mavitrika Fahita teo amin'izy io. Niaraka tamin'i Pippi an-trano, mbetika sy ny milomano ao amin'ny heniheny kely teny an-dalana. Arakaraka ny milalao, akanjo hazo Krismasy sy ny ravaka-trano sy ny fisainana avy tao amin'ny infield. Aza manao raha tsy misy ny kilalao telo misesy, Puzzles sy fandokoana. Mihazakazaka izany amin'ny balafomanga miakatra, manampy amin'ny manidina iray lavitra be, ary mampihatra ny mozika ao amin'ny mety sofina fahafinaretana, mamerina ny fiderana.
Lalao Peppa Kisoa tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra Peppa Kisoa Games
Peppa Kisoa: Fa PC
Peppa Kisoa: Ny trano vaovao
Peppa Kisoa: Great baskety
Very hevitra tsiky kisoa fotsy Zuzzy
Peppa Kisoa eraky ny trano ho an'ny Halloween
Peppa Kisoa amin'ny habakabaka
Mason'ny Peppa kisoa
Peppa Kisoa amin'ny bisikileta
Puzzle Peppa Kisoa sy ny lamba maloto
Peppa Kisoa. Manadio ny efitrano
Miraharaha kisoa Peppa
Peppa Kisoa: Printing
Peppa Kisoa orona manasitrana
Peppa Kisoa: Maze
Peppa Kisoa. Noughts sy ny hazofijaliana
Peppa Kisoa: Decor trano kely
Peppa Kisoa: Mason'ny
Peppa Kisoa sy ny an-trano Haingo
Lost kintana kisoa Peppa
Garden Decor kisoa Peppa
Peppa Kisoa biby fahana
Peppa Kisoa. Mitsambikina in puddles
Musical fahatsiarovana kisoa Peppa
Manadio ny efitra fandroana
Peppa Kisoa manadio ny trano
Makeup Peppa kisoa
Peppa kisoa Farm
Bouncy traikefa nahafinaritra Peppa kisoa
Mumps eo amin'ny bisikileta. Fandokoana boky
Peppa Kisoa: Puzzles
Ny Haingo ny fisakafoanana Peppo
Peppa Kisoa: Tsindrio Up
Peppa Kisoa: hazo krismasy
Peppa Kisoa sy George: Mpivady
House kisoa Peppa
Peppa Kisoa Racing Battle
Peppa Kisoa Bros World
Peppa Kisoa School
Flying kisoa Peppa
Peppa Kisoa: World Championship - Dress Up
Peppa Kisoa sy ny fanadiovana isan'andro
Sinka Peppa: Daddy Kisoa ao amin'ny riaka nitondra
Peppa Kisoa Krismasy Tree Deco
Peppa Kisoa Jigsaw
Peppa Kisoa: loko fahatsiarovana
Peppa Kisoa: Tetris
Peppa Pig miala
Farany Peppa Kisoa Games
Piggy Looking For The Road
Peppa Pig: Fianakaviana miakanjo
Peppa Pig: Antoko
Peppa Kisoa: Fahasamihafana
Peppa Kisoa Dino nanafika an'i Angletera
Mampihomehy lalao maimaim-poana amin'ny aterineto Peppa Kisoa dia mamela ny mpilalao kely pobezobraznichat manampy herôinina splashing puddles izay rehetra misy ao an-dalana
Lalao Online Rehetra Peppa Kisoa Games
Funny kisoa Peppa lalao an-tserasera dia hamela anao ny mitsiky, raha tampoka nahatsapa alahelo onja. Ny mpilalao fototra, Peppa kisoa, tena mahafinaritra-tia, plump sy mavokely, izay mifanentana amin'ny ho kisoa. Mipetraka amin'ny trano amin'ny:
Neny a kisoa,
kely ny rahalahy George.
momba ny nitifitra sariitatra, izay izy sy miasa amim-pifaliana foana, mitady traikefa nahafinaritra sy namana vaovao. Ny fialam-boly maro izy, ary tena tia ny hanandrana zava-baovao, fa ny lehibe indrindra dia ny filan'ny nofo hanosotra amin'ny puddles sy fotaka andevozin'ny svinushek fantatry ny rehetra.
Milalao Free Games ho an'ny ankizivavy Peppa kisoa, tsy nahita azy fotsiny toy izany koa tianay, ary na dia nametraka ny firaketana an-tsoratra hanampy ho nilomano ao amin'ny dobo. Aiza koa no azonao mandry ao anaty fotaka be tsy ho voasazy noho ny fitafiana maloto? Azo antoka fa tsy ho nakòn indray ny mandeha, milaza ny teny malala ray aman-dreny rehetra; « mba maloto toy ny kisoa ». Ankehitriny, mihainoa toy ny, te-hitsiky sy hanomboka ny lalao malalaka Peppa Kisoa.
isan'andro Pippi zava-nitranga vaovao, sy raha Ny alina nialoha ny ranonorana mivatravatra, ny puddles ao amin'ny distrika lehibe Nihevitra isan-karazany. Fa ny kisoa, izany dia midika fa ny fotoana dia tsy very foana. Nahita azy an-trano, dia aza malahelo puddle dia iray akory aza. Press samy rehefa miseho eo amin'ny solaitrabe, Gilt ary niaraka tamin'izay dia hitsambikina ao anatiny ho be napleskatsya. Tsara raha tsy tara iray, dia ny firaketana an-tsoratra dia ho tanteraka. Ary rehefa tonga tao an-trano ny mahery fo izay monina eo amin'ny tokonam-baravaran'ny reniny, dia mitsiky izy ka nahita grimy nahafinaritra vavy.
hafa mahafinaritra lalao Peppa Kisoa
Misy ihany koa ny kilalao mahafinaritra hafa kisoa izany. Ohatra, izy tia noughts sy ny lakroa. Afaka misafidy ny milalao ho an'ny roa na tokan-tena, dia ny mpilalao faharoa dia hifehy ny solosaina. Izany tena tsotra – ianao hanohy ny totozy eo amin'ny voafidy efamira, ary hita ny mavokely fehim Pippi, ary ny mpanohitra manao ny hetsika sy manamarika ny fotsy fehim tranom-borona. Tandremo tsy hamela ny ordinatera nikapoka anao. Fitsipika fantatrao – dia ilaina ny hanorina sary toy izany koa ao amin'ny tsipika mitsangana, horizontally na diagonally. Mba ho afaka ny hanao izany aloha, dia ho ny mpandresy. Taorian'ny fihodinana voalohany mba hanohy ny fifaninanana, ny ankavanana, izay eo anoloan'ny tsirairay nanamarika mpilalao maro, tsindrio eo amin'ny tavan'ny manintona ny toetrany sy eo anatrehanao reappear tsaha. Ny olona izay nahazo teo aloha, dia nanomboka manodidina vaovao.
amin'ny fotoana hafa ny dingana ny lalao Peppa kisoa kilalao tolotra & laquo, telo misesy ». Eo an-tsaha niparitaka miloko kristaly, ary mila hanangona hiray izay dia nomeny làlana mankany amin'ny vaovao. Tsindrio eo amin'ny zavatra mba hanova toerana, ary raha nifidy ny marina anefa, dia hitranga. Tena tsara, raha afaka manala amin'ny saha ny mihoatra ny telo kristaly – dia hitondra kokoa ny hevitra. Ary tokony hieritreritra momba ny fitadiavana Mazava ho azy fa vaovao araka ny nahatonga – singa azo swapped, ianareo dia hanomboka ny hami. Na dia eo aza ny zanany taona, Peppa efa mahafehy tanteraka karazana karatra sasany solitaire, fa azy ny ankamaroan'ny toerana tena – Tapeworm. Ho azy izany afaka mametraka nandritra ny ora maro, ary raha toa ka mizara ny firehetam-po, hiaraka ny dingana.
Noho ny kisoa tsy maintsy ho maro niainany mahafinaritra kokoa, tsidiho ny fanorenana toerana sy mba hanampiana ny dadako trano vaovao ho an'ny fianakaviana. Lay biriky, fitaratra varavarankely, ataovy amin'ny tampon-trano, nandoko ny rindrina sy hifidy ny bozaka savily – Ny tranony dia vonona! Na dia eo aza Pippi mahafinaritra mitsambikina avy amin'ny tilikambo izy farihy, milalao baskety, mba hampitaovana ny zaridaina sy ny toeram-pilalaovana, ary na dia Misafotofoto bukovki hamakivaky hianatra ny teny anglisy abidy, vonona handeha any an-tsekoly.